Mashi 25, 2019
Konke mayelana neDihydroboldenone
1.Iyini i-Dihydroboldenone / DHB? I-2. Isilinganiso seDihydroboldenone / DHB
3.Dihydroboldenone / DHB umjikelezo Imiphumela ye-4.Dihydroboldenone / DHB
Imiphumela emibi ye-5.Dihydroboldenone / DHB I-6.Dihydroboldenone / DHB ukuphila kwehafu
7.Dihydroboldenone / DHB yokusika I-8.Dihydroboldenone / DHB ye-bulking
Izinzuzo ze-9.Dihydroboldenone / DHB Ukubuyekezwa kwe-10.Dihydroboldenone / DHB
11.Dihydroboldenone / DHB ukudayiswa 12.Dihydroboldenone / 1-Testosterone yokwakha umzimba
I-1. Kuyini i-Dihydroboldenone / i-DHB?
I-Dihydroboldenone (65-06-5) ikakhulukazi ekubhekiswe kuwo DHB i-steroid enamandla enikezela imiphumela emihle ikakhulukazi emzimbeni, abagijimi nabagibeli. Abantu abaningi badidisa i-DHB nge-Methyl 1-test ngenxa yegama layo elingamagama 1-testosterone. Kodwa-ke, lezi zidakamizwa ezimbili zihlukile, futhi zombili ziletha imiphumela ehlukene nemiphumela emibi nayo. Isidakamizwa saziwa ukuthi siphakathi kwama-steroids anamandla kakhulu anika imiphumela yekhwalithi kubo bonke abasebenzisi bayo. I-Dihydroboldenone i-5-alpha encishisiwe ye-Boldenone eyisizathu segama layo. Konke Okudingeka Ukwazi Ngo-Anavar (Oxandrolone) ye-Bodybuilding
Uma kuqhathaniswa no-testosterone, i-DHB iphinda ibe ne-anabolic kabili futhi i-androgenic encane. Kodwa-ke, imiphumela enamandla yezidakamizwa kungenzeka ukuthi ayikwahlulelwa kalula ngoba abadlali abaningi bakhetha ukusebenzisa i-Primobolan. I-dihydroboldenone iyaziwa ngokuthuthukisa ukukhula komzimba, yenza kube nzima futhi kuthuthukiswe amandla omzimba jikelele. I-DHB enamandla amandla avela isici yenza i-steroid ikwazi ukuletha imiphumela enokwethenjelwa nemiphumela emihle ngemiphumela emibi. Isidakamizwa sisebenza kahle kakhulu ekulawulweni kwe-SHGB ngaphandle kwemiphumela emibi.
Uma kuthathwa ngendlela efanele i-steroid ivuselela ukukhiqizwa kwemisipha emzimbeni kanye nokuyigcina ikhuni futhi iqinile. Ukuze ukwakhiwa komzimba, kufanele uhambisane nayo ngemisebenzi efanele yokuphuma ukuze uthole imiphumela ephezulu. I-DTH iyi-hormone yemvelo eyenzeka emzimbeni wakho ngemva kokuguqulwa kwe testosterone. Njengamanye ama-steroids asetshenziswe ku-DTH nase-DHB, i-testosterone iguqula i-estrogen ne-DTH. Kuye ngezinga lakho lokusebenzisa, udokotela kufanele akuqondise ekunqumeni isilinganiso esifanele. Ukuze uphephe, ukuhlolwa kwezokwelapha kufanele kwenziwe ngaphambi nangemva kokuqeda umjikelezo wokuqala. Izidumbu zabantu zithinta ngokungafani nezidakamizwa kakhulu ngakho-ke ama-steroids, ngakho-ke ukuphathwa kwezempilo okubalulekile kubalulekile emiphumeleni engcono.
I-Dihydroboldenone (65-06-5), njengamanye ama-steroids uye wadlala indima ebalulekile ekusizeni abagijimi ukuba bafeze imigomo yabo ngokunikeza amandla kanye nokukhula kwemisipha yekhwalithi. Isidakamizwa sinemiphumela emibi kakhulu eyenza ibe yinto enhle kubaningi bomzimba abaqeqeshiwe. I-dihydroboldenone i-anabolic enamandla kakhulu ukuthi isakwazi ukuhlinzeka imisipha emihle kubasebenzisi bayo. Isidakamizwa asikhulisi ukugcinwa kwamanzi emisipha futhi kunemiphumela emihle yokunambitheka. Ngamafuphi, uma ufuna isterodi eyokusiza ukuthi uzuze imisipha futhi uthuthukise ukusebenza kwakho, ke i-DHB iyinhlanganisela engcono kakhulu kuwe.
Ukukhathazeka okuwukuphela kwabantu abasebenzisi be-Dihydroboldenone abanakho, yizinhlungu zomjovo zokuthutha okungafanele zikuvimbele ekusebenziseni umkhiqizo uma uqhathaniswa nemiphumela enikeza ngayo. Isidakamizwa sinikeza amandla omzimba okwenza abasebenzisi basebenze amahora amaningi futhi bafinyelele imiphumela efunayo. Abagibeli bamahhashi bathola amandla amancane okwenzayo nokuncintisana phakathi nemincintiswano. Abanye abasebenzisi bakhononda ngezinhlungu kuze kube yizinsuku ezingu-7 ngemuva kokujola. Kodwa-ke, udokotela wakho angakusiza ukulawula inkinga, kepha ukusetshenziswa kwamafutha okugcoba njengendlela inzalo kungasiza. Ngaphandle kwalokho, lo muthi uhlala uyintandokazi yabadlali abaningi abasha. Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukuthenga i-steroid kumthengisi onokwethenjelwa nolwazile ulwazi olunikeza imikhiqizo yekhwalithi kanye nokulethwa ngesikhathi.
I-2. Isilinganiso seDihydroboldenone / DHB
Izinga elihle le-DHB lisukela ku-300 kuya ku-400mg ngesonto kubasebenzisi besilisa. Isidakamizwa singasetshenziselwa abagijimi besifazane kodwa ngezindlela eziphansi. Kubantu abagijimi besifazane, kuhle ukuba uqale ngezindlela eziphansi kakhulu ukugwema imiphumela emibi efana ne-virilization. Isibalo sabathameli besifazane kufanele sibe phakathi kwe-25 kuya ku-100mgs ngesonto. Kodwa-ke, kwabesifazane abane-zero okuhlangenwe nakho nge-anabolic steroids, umthamo unganciphisa udokotela, bese wanda kamuva emva kokuqeda umjikelezo wokuqala. Okufanayo kusebenza nasemadodeni; Abaqalayo kufanele bagweme imithi ephezulu ye-dihydroboldenone futhi njalo babonisane nodokotela ngaphambi kokwandisa amanani.
The I-Dihydroboldenone imvamisa yokulinganisa ixhomeke ku-ester enamathele kulesi sakhi, kepha lokho akuthinti ama-dosage. Njengamanje, i-cypionate yi-ester ejwayelekile kakhulu esetshenziselwa ukukhiqizwa kwalesi sidakamizwa. Izinga elilinganiselwe lendoda namanje lisukela ku-200mgs kuya ku-400mgs ngesonto kungakhathaliseki ukuthi i-ester ihilelekile. Udokotela wakho kuzodingeka akuqondise ukuze uqinisekise ukuthi ugcina amazinga adingekayo ngemiphumela engcono. Uma kuthathwa ngomlomo, lesi sidakamizwa sizothathwa ngokuphindaphindiwe kune-injection. I-Dihydroboldenone inamandla kakhulu esimweni sayo somlomo futhi inempilo encane kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, umthamo womlomo awutholakali ngoba awunayo i-methylated futhi lokho kusiza ekuvikeleni ekuphukeni kwesibindi. Uma ukhetha ifomu le-dihydroboldenone elingenayo, kuphela i-100-200mgs ngesonto iyokwanela imiphumela engcono. Khumbula ukuthi ama-injection ejojwayo kufanele alawulwe yilabo bezokwelapha noma uma unamakhono kuwo ungazifaka. Ungabungozi uma ungaqiniseki ngalokhu ukugwema izinkinga ezengeziwe.
Ngezinye izikhathi, udokotela angaphoqeleka ukuba akhulise noma anciphise umthamo emva kokuhlola isimo sakho sezokwelapha. Abagijimi abaningi benza iphutha lokuthenga lesi sidakamizwa ngokuqondile emakethe futhi bayisebenzise ngaphandle kokubandakanya udokotela. Izidumbu zabantu zihlukile futhi nje ngoba umkhiqizo usebenza kumngane wakho akusho ukuthi kuzokuphelela. Abanye abantu bazodinga amanani aphezulu okuqala ngenkathi ezinye izilinganiso eziphansi kakhulu zizophelela. Njalo uhilele udokotela wakho, umqeqeshi, kanye nomsoco wokudla ngemiphumela engcono. Ngezinye izikhathi izilinganiso ezishiwo umenzi zingase futhi zihluleke ukukusebenzela noma zibe nemiphumela emibi kakhulu.
I-3. Umjikelezo we-Dihydroboldenone / DHB
Ngokuvamile, abasebenzisi abaningi baqala imijikelezo yabo ngomlomo ngaphambi kokuyibeka nge-400-500mgs ye-DHB ngesonto kanye ne-testosterone ende ester. Kunconywa ukuthi kufaka phakathi i-aromatase inhibitor emjikelezweni we-DHB ukulinganisela i-estrogen evela ku-testosterone. Ukwengeza, ungasebenzisa izithako zokusekela ezifana ne-N2Guard. Xhumana nodokotela wakho ngolwazi oluthe xaxa futhi uhlele umjikelezo ohamba phambili ngokuvumelana nezidingo zakho noma imiphumela oyifunayo. Eminye imijikelezo ingaba yinde kunabanye, kuye ngokuthi izinga lokusebenzisa lomdlali. Abasebenzisi be-hardcore ngokuvamile banomjikelezo owedlule weDihydroboldenone kunabaqalayo. Ukujikeleza ukujikeleza nokujikeleza kwezinto ezihlukeneyo kuhlukile futhi kuhlanganiswe nezinhlanganisela ezihlukahlukene. Uma kwenzeka uqedela umjikelezo futhi uhluleka ukuthola imiphumela oyifunayo noma uhlangabezana nemiphumela emibi, yazisa udokotela wakho.
4. Imiphumela yeDihydroboldenone / DHB
The DHB Imiphumela ukuthi uzothola kuncike ekusebenziseni kwakho izidakamizwa nokuthi uhamba kanjani nezinye izidingo ezifana nokusebenza nokudla. Kulabo abasebenzisa bajabulela imiphumela emihle futhi bafeze imiphumela yabo efisa. I-Dihydroboldenone ayithathwa njengeyodwa ye-anabolic steroids ephezulu, kodwa inikeza imiphumela emihle kubasebenzisi abaningi. Isidakamizwa saziwa ngokunika amandla abasebenzisi ukuthuthukisa imisipha enamandla neqinile. Umgomo wabo bonke abakhiqizi bomzimba ukukhula okuqinile nokubuthakathaka okuzobenza bakwazi ukuncintisana ngempumelelo. I-dihydroboldenone iyi-steroid eqinisekisa imisipha yekhwalithi yabasebenzisi esikhathini esifushane kunokwenzeka. Ukuhambisana nomthamo ngezinsiza ezisekela kuyoba umqondo omuhle ekufezeni imiphumela efunayo.
Lesi sidakamizwa sandisa futhi amandla omzimba jikelele azosiza abagijimi ukuba basebenze amahora amaningi futhi bathole kalula imisipha. Umgomo omkhulu kubo bonke abagijimi kufanele baphumelele emsebenzini wakhe, futhi yilokho okushiwo yi-dihydroboldenone. Iningi labadlali abaye basebenzisa lesi sidakamizwa banikeze impendulo enhle futhi bayidumise ngokubenza bakwazi ukunqoba iziqu ezihlukene ngemuva kokuqeda ngempumelelo umjikelezo wokulinganisa. Ezimweni eziningi, abadlali abahluleka ukunqoba ngenxa yokuntuleka kwamandla, kodwa yinkinga ezoxazululwa ngesikhathi usuqeda umjikelezo wakho we-DHB. Uma kwenzeka uhluleka ukuthola imiphumela ngemuva komjikelezo wakho, uxhumane nodokotela wakho ukuze uthole olunye usizo. Eminye imiphumela engaba khona yimiphumela emibi uma uchitha ngokweqile noma uhambisane nemiyalelo kadokotela.
I-5. Imiphumela emibi ye-Dihydroboldenone / DHB
I-1-Testosterone (65-06-5) iyi-steroid ehle kakhulu eguquliwe ngezikhathi ezithile ukuthuthukisa izinzuzo zayo nokunciphisa imiphumela emibi. Nokho, ngenxa yobunzima bokubunjwa komzimba womuntu, abasebenzisi abaningi bahlangabezana nemiphumela emibi ehlukene ngemva kokusebenzisa i-steroid. Ngezinye izikhathi abasebenzisi babhekana nemiphumela emibi ngokushesha baqala umjikelezo wabo, ngakho-ke, kuncomeka ukukwazisa udokotela wakho ngokuhamba kwesikhathi. Udokotela anganciphisa umthamo futhi uma ungasebenzi yena / angayeka futhi umjikelezo wonke. Kwezinye izimo, abasebenzisi bahlangabezana nemiphumela emibi ngemva kokuqeda umjikelezo. Nazi ezinye ezivamile i-dihydroboldenone okuqhamuka uma udla imishanguzo;
Amajova abuhlungu - abasebenzisi abaningi bakhononda izinhlungu endaweni yokujova ngezinye izikhathi ezingahamba cishe ngesonto. Eqinisweni, lokhu kungenye yezinkinga ezivame kakhulu abantu abaningi ababhekene nomzimba uma beya e-steroids engenayo. Noma kunjalo, ungashintsha umthamo womlomo, nakuba unamandla kakhulu uma uqhathaniswa ne-injection. Uma ucabanga ngemiphumela yokungenwa injectable oyothola yona, izinhlungu akufanele zikuvimbele ekufinyeleleni imigomo yakho.
Ukulahleka kwezinwele: ngezinye izikhathi uma i-overdosed, i-steroid ingaba nomthelela oqondile ezinyaweni zakho. Nokho, ukuxhumana nodokotela wakho ngokuhamba kwesikhathi kungasiza ukulawula inkinga. Ezinye imiphumela emibi zihlanganisa, ukwehlisa amakhomende, kubangele ukulimala esibindi futhi kuthinte inhliziyo yakho nokusebenza kwesibindi. Le miphumela ijwayelekile kulabo abadlula i-steroid noma bayisebenzise ngaphandle kokuhlolwa kwezokwelapha. Ngezinye izikhathi izimo zomzimba zingandisa ukwanda kwemiphumela emibi.
Kwabesifazane, i-steroid ingaholela ekuthuthukiseni izici zesilisa ezifana nokukhula kwamasipha nokujula kwezwi phakathi kwabanye. Ngakho-ke, abesifazane kufanele bathathe lesi steroid ngokuqapha futhi banamathele emibhalweni yokusetshenziswa kadokotela ngemiphumela engcono. Okungalungile okuyinhloko ngale steroid ukuthi imiphumela ayiyona esheshayo, okusho ukuyiqeda namhlanje kungase kungabonakali imiphumela, kodwa ungase ubabone esikhathini esizayo. Mhlawumbe, yingakho abasebenzisi abaningi be-steroid behluleka ukuyisebenzisa. Uma unamathele emiyalweni yokusebenzisa khona-ke uzoba ohlangothini oluphephile.
I-6. I-dihydroboldenone / i-DHB yokuphila kwengxenye
I-DHB ihlanganiswe kakhulu ekuqhumeni i-ester eyandisa i-DHB isigamu sempilo cishe ngezinsuku ezingu-8-10, yingakho le mithi ifakwa ngemuva kwezinsuku ze-4 noma ze-6. Udokotela wakho uzoklama umjikelezo futhi uhlele izikhathi eziningana zokulinganisa kuye ngokuthi i-ester ifakwe kanye nemiphumela oyifunayo. Ngemuva kokuqedela umjikelezo wakho, i-DHB ihlala isebenza emzimbeni wakho mayelana namasonto e-5 ngaphambi kokuba ilahleke ngokuphelele emzimbeni wakho. Futhi isikhathi esithathwe ukusula esimisweni somzimba sizoxhomeka ku-ester enamathiselwe ku-DHB. Ngakho-ke, uma uzokwazi ukuncintisana emincintiswaneni engavumeli ukusetshenziswa kwe-steroids, khona-ke lazise udokotela wakho, ukuhlinzeka ngomuthi omuhle kakhulu ozophela phakathi nesikhathi esifushane kunokwenzeka.
Isilinganiso se-Oral DHB sinomphetho omfushane kakhulu futhi sinamandla kakhulu kune-injection. Ngakho-ke umthamo womlomo uzosho ukuthi uzothatha kaningi kangako nsuku zonke ukuze uthole imiphumela oyifunayo. Kodwa-ke, ama-bodybuilders ahamba kakhulu ngenxa yesilinganiso esingenayo injectable ngoba sinamandla futhi futhi amathuba okulahlekelwa umthamo awuncane kakhulu. Uzodinga kuphela ukujova umuthi kanye ngesonto. Uma ungakhululekile ngemishanguzo, ungakhuluma nodokotela wakho ukuhlinzeka ngomthamo womlomo.
I-7. I-dihydroboldenone / i-DHB yokusika
Imijikelezo ye-DHB yokusika umzimba kusiza ukususa amafutha omzimba okungadingekile noma ukugcinwa kwamanzi emisipha ngenjongo yokufeza imisipha eqinile neyomzimba. Lapha umgomo wakho ukuchitha amakhilogremu amaningi ngangokunokwenzeka futhi ufeze izinsimba zakho ezifunayo noma ukuma komzimba. I-DHB isize abagijimi abaningi emigqeni yabo yokusika, yingakho kuyisidakamizwa ethandwayo phakathi kwabadlali be-elite. Uma ukufakwa kahle kahle kuyashisa amafutha omzimba okwedlulele futhi ekugcineni kufaka zonke izicubu zomzimba. Ukusika futhi kusiza ekunikeni amandla omzimba ukuba afinyelele ukuma komzimba kanye nemisipha eqinile. Xhumana nodokotela wakho, ukukuhlinzeka ngomjikelezo we-DHB wokusika nokuhamba kahle.
8. I-Dihydroboldenone / i-DHB ye-bulking
Lapha uhlose ukuzuza imisipha eminingi nesisindo. I-DHB inezici ezimangalisayo ezenza kube kuhle kubagijimi ngakho-ke izici zomzimba. Umjikelezo we-dihydroboldenone wokukhwabanisa uhilela ukuthatha isisindo esiphezulu ngeviki njengo-400 kuya ku-500mgs nokudla okufanele. I-steroid inomlando omuhle kakhulu wokusiza abagijimi bazuze izinga eliphezulu nemisipha eqinile. Khumbula ukubukela ukudla kwakho bese usebenzela imiphumela engcono. I-Ultimate Guide ku-Stanozolol (Winstrol) ye-Bodybuilding
Imvamisa ye Ukudonsa i-DHB umthamo uzothathwa yi-ester ehlanganiswe kuwo. Udokotela wakho uzobe esesimweni esihle kakhulu sokuhlelela izilinganiso ezifanele kuwe. Kuye ngokubunjwa komzimba wakho futhi udinga udokotela uzobe esenquma izithako zokusekela ezokusiza ukuba uthole imiphumela efunayo kalula. Kulabo besifazane, inqubo efanayo izosebenza, kodwa amanani azoba aphansi ukuze agweme ukuthuthukiswa kwezici zesilisa.
I-9. Izinzuzo ze-Dihydroboldenone / DHB
Izinzuzo ze-DHB kubasebenzisi bayo abaningi ikakhulukazi abaqashi bomzimba. Isidakamizwa sibheka njengenye ye-anabolic steroids enamandla nakuba ingafakwa eminye imikhiqizo edumile. Emaphepheni, lesi sidakamizwa sibonakala singaqinile, kodwa labo abasisebenzisayo baye babika imiphumela emihle njalo. I-DHB ivuselela ukukhula kwemisipha futhi ithuthukise amandla omzimba jikelele. Abagijimi bathatha ama-steroids ukuze babasize ekwakheni imisipha enamandla futhi bathole amandla okuncintisana kanye nokusebenza ngendlela efanele. Kusuka kuzibuyekezo zamakhasimende kumapulatifomu ahlukahlukene, i-DHB ayisoze yadumazeka. Abasebenzisi abaningi babonisa impumelelo yabo emsebenzini wabo wezemidlalo kulo muthi.
Ukwengeza, i-dihydroboldenone ayikhuthazi ukugcinwa kwamanzi emisipha noma i-aromatize. Ngakho-ke, uma uthatha izidakamizwa, uzoqiniseka ukuthi uzothola imisipha yekhwalithi futhi uzonciphisa kalula amafutha omzimba kalula. Ukuze uthole izidakamizwa, lo muthi usebenza kahle kakhulu nezinye izithako. Ekujikelezeni noma ekugwedleni, ungaqiniseka ukuthi i-steroid izohlinzeka ngemiphumela emihle kakhulu.
I-DHB nayo inezimbangela ezimbalwa uma iqhathaniswa namanye ama-steroids okwenza kube kuhle kubagijimi nama-bodybuilders ochwepheshe. Abagijimi besifazane bangasebenzisa i-steroid kodwa ngamasenti aphansi; inikeza imiphumela efanayo. Abagijimi besifazane basebenzisa lesi sidakamizwa ukuthuthukisa ukusebenza kwabo kanye nokuthuthukisa amandla omzimba wabo. Abesifazane bayelulekwa ukuba baqaphele kakhulu ngenkathi basebenzisa le mithi. Ochwepheshe batusa ukuthi abesifazane abakhulelwe kufanele bacabange ukuhlala kude nale steroid ngoba kungathinta umntwana ongakazalwa.
I-Dihydroboldenone ikhona kokubili ifomu yomlomo kanye nomjovo. Ngakho-ke, ukunikeza izinketho zesilinganiso somsebenzisi. Uma ngabe ungakhululekile ngemishanguzo ngenxa yezinhlungu ungakhetha umthamo womlomo. Abantu abaningi bakhononda ngokuthi ama-DHB amajojo ayabuhlungu kanti ubuhlungu bezinye izikhathi buhlala ngisho neviki, isimo esidala abanye abasebenzisi.
Noma kunjalo, lokhu akufanele kukuvimbele ekufinyeleleni imigomo yakho. Yazisa udokotela wakho ukukunikeza umthamo womlomo nakuba kuzodingeka uthathe kaningi ngaphezu kwesigciwane. Ngakolunye uhlangothi, iningi lemiphumela emibi ye-dihydroboldenone ingalawulwa ngokunamathela emiyalweni kadokotela. Ngamafuphi, akukho lutho lokukhathazeka mayelana nokusebenzisa le steroid, uma nje uhilela ochwepheshe bezokwelapha kulo lonke uhlelo.
I-10. Ukubuyekezwa kwe-Dihydroboldenone / DHB
I-Dihydroboldenone ithola ukubuyekezwa okungafaniyo nokubuyekezwa kwe-DHB kusuka kumakhasimende ahlukene. Abanye abakhiqizi bomzimba baye bakunika ukulinganisa okuhle ngenkathi abanye bekhalaza ngokungatholi imiphumela abayifunayo. Kodwa-ke, iningi labadlali be-elite abaye basebenzisa i-steroid isikhathi eside bonke bayajabula futhi bathi umphumela wabo ube yi-dihydroboldenone. Ukubuka ukubuyekezwa komkhiqizo ohlukile, kucacile ukuthi abasebenzisi abaningi banelisekile ngemiphumela umuthi ohlinzekayo. Abanye abasebenzisi bayathokoza ukuthi baye bazuza imisipha yekhwalithi futhi bathola amandla omzimba jikelele. Ngakolunye uhlangothi, abanye abasebenzisi banomuzwa wokuthi isidakamizwa sinezici ezifanayo ze-trenbolone ezifaka phakathi kokubangelwa ukuleleka ngezinye izikhathi nokuthuthumela.
Ngaphezu kwalokho, abadlali abahlukahlukene be-elite babonisa injabulo yabo ngoba umkhiqizo awulimazi ukudla, ngaleyo ndlela ube yinto engcono kakhulu yokusiza imijikelezo. Kukhona labo ababika isipiliyoni esinomsoco nesidakamizwa ngakho-ke ubuhlungu bokujola. Abanye abasebenzisi be-dihydroboldenone bathi kufanele banake izinhlungu zomjovo ngezinsuku ze-7. Izinhlungu zokujola zivamile futhi zingalawulwa uma utshela udokotela wakho ngokuhamba kwesikhathi.
Njengoba kushiwo ngaphambili, imizimba yabantu isabela ngokungafani nemikhiqizo ehlukene ikakhulukazi i-steroids. Abanye abantu bazizwa behlelekile ngemilenze kanti abanye bazizwa bengakhululekile. Imiphumela emibi nayo iyinkinga enkulu ephakanyiswe abasebenzisi abaningi. Kukhona labo abakhononda ikhanda elinzima, ukuleleka nokukhukhuma ngokweqile. Zonke lezi zinkinga zingaxazululwa uma uya kokuhlolwa kwezokwelapha ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa i-steroid kanye nokuhlolwa okujwayelekile njengoba uqhubeka nomjikelezo wakho. Njengezinye i-anabolic steroids, i-dihydroboldenone iyadambisa. Ngakho-ke, ukwelapha okufanelekile kwe-post cycle (PCT) kufanele kwenziwe, futhi ukwesekwa okunezela kudingeka kufakwe emjikelezweni.
11. I-Dihydroboldenone / i-DHB ethengiswayo
Njengomdlali wezemidlalo, awukwazi ukubeka ingozi emsebenzini wakho ngokuthenga i-DHB ukudayiswa kusuka kubathengisi abathembekile nabangenalwazi. Indlela kuphela yokuthola imikhiqizo yekhwalithi ngokubathola kusuka kumkhiqizi owaziwayo noma onolwazi noma umdayisi. Njengamanje, imakethe igcwele izidayisi nabathengisi abaningi be-steroid kodwa ukuba babe ohlangothini oluphephile; udinga ukuhlukanisa okweqiniso kusuka kumakhohlisi. Eminye imikhiqizo emakethe kungenzeka ingahambi kahle ngomzimba wakho. Singumkhiqizi we-DHB umhlabeleli kanye nomphakeli. Senza ukudiliva emhlabeni wonke, futhi udinga kuphela ukwenza i-oda lakho kuwebhusayithi yethu, futhi sizoletha esikhathini esifushane kunokwenzeka. Siyaqonda ukuthi ukubaluleka kwemali kuyisihluthulelo. Ngakho izindleko zethu ezifanele aziphazamisi ikhwalithi yemikhiqizo yethu.
E-BUYAAS, ungakwazi Thenga i-DHB ngobuningi noma ngisho wenze umyalelo owanele wokujikeleza kwakho noma nini kusukela ekududuzeni kwendlu yakho. Sinezinqubo zokukhokha eziguquguqukayo ukuze sibheke wonke amakhasimende ethu akwaziyo. Ukuthenga nathi kukunika ukuthula kwengqondo, futhi ungaqiniseka ngokuthola imiphumela oyifunayo. Sihlale sinxusa wonke amaklayenti ethu ukuba enze ucwaningo lwemakethe ngaphambi kokuhlelwa kunoma yimuphi umthengisi we-DHB. Hamba umkhiqizi ohloniphekile we-Dihydroboldenone / DHB njengo-BUYAAS ngaso sonke isikhathi. Khumbula ukuthi i-steroids ingabangela imiphumela emibi emzimbeni wakho uma uthatha ikhwalithi ephansi noma mhlawumbe ungahlanganiswa kahle. Kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo ye-steroid engamanga, futhi uma ungenandaba, ungase uwele ezintheni zabo njengoba imikhiqizo engabizi ngaphezu kweqiniso.
Iwebhusayithi yethu inomusa; Ngakho-ke ungakwazi ukuthenga kalula i-Dihydroboldenone / i-DHB ku-inthanethi kusuka ku-PC, i-laptop noma i-smartphone yakho. Sakha i-steroids ehlukile ye-quality ngaphandle kwe-dihydroboldenone.
Khumbula ungase futhi Thenga i-Dihydroboldenone powder kusuka kuwebhusayithi yethu. Noma kunjalo, sikhuthaza amaklayenti ethu ukuba aqonde umthetho wezwe mayelana nanoma yimuphi umkhiqizo awuthengayo kusuka kwipulatifomu yethu. Amanye amazwe aqinile futhi adinga imvume noma udokotela kadokotela ngaphambi kokungenisa noma ukuthenga ama-steroids athile. Ngokufingqa, sithenga okuhamba phambili Abahlinzeki be-Dihydroboldenone emhlabeni jikelele, nayo yonke imikhiqizo yethu iye yaqinisekiswa futhi yaqinisekiswa yizo zonke izinhlangano ezijwayelekile zomhlaba jikelele. Ngomusa qinisekisa ukuthi uya kuhlolwa kwezokwelapha ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa imikhiqizo yethu ukuze ugweme ukubhekana nemiphumela emibi
I-12. I-Dihydroboldenone / i-DHB (i-1-Testosterone) yokwakha umzimba
I-DHB ibe umkhiqizo obalulekile embonini yomzimba futhi isiqinisekisile ukuthi ingaletha imiphumela ethembisa yona. Ngokwesibonelo, cishe bonke abadlali abaye basebenzisa i-DHB baye babika imiphumela emihle. Lesi sidakamizwa sivuselela ukukhula kwemisipha kanye nokuthuthukisa amandla omzimba futhi ekugcineni ngcono ukusebenza. I-Dihydroboldenone iye yadunyiswa ngenxa yendima yayo kokubili imijikelezo yokukhwabanisa nokusika. Uma usebenzisa le mithi, awunazo isizathu sokukhathazeka ngokugcinwa kwamanzi nokunambitheka kwamanzi njengoba kungabangeli izinkinga. Imiphumela emibi nayo iphansi uma iqhathaniswa namanye ama-steroids, ngakho-ke, kuhle ukuhamba uma wenza i-oda lakho namuhla.
Ukuhambisana nomjikelezo wakho ngokudla okufanele nokusebenza kahle kuyoba umqondo omuhle ekufezeni imiphumela yekhwalithi. Isidakamizwa asithinti isifiso sakho, okushiwo phakathi kwemijikelezo yokudonsa ungathola ukudla okufanele ngaphandle kwenkinga. Ukunamathela esilinganisweni esifanele kunesinye isici okufanele ugxile kuzo, ngenkathi ujikeleza. Umqeqeshi wakho nodokotela wakho bangabantu abangcono kakhulu ukukuqondisa ngenkathi uhambo lwakho lomzimba. I-DHB inesakhiwo esiyingqayizivele esinikeza ngemisipha eqinile, eqinile neyamehlo yonke izifiso zomzimba. Emijikelezweni yokusika, ukufaka i-steroid nezinye izithako kuzokusiza ekuthungeni amafutha omzimba angafuneki. I-dihydroboldenone isebenza kahle nezinye izithako zokusekela, kanti isigamu-impilo siyoxhomeka ku-ester ehlanganisiwe.
Asikho isizathu sokungabaza amandla e-DHB njengoba kuye kwaba isimanga kubo bonke abasebenzisi abathembele. Nakuba imiphumela engeyona esheshayo, ekupheleni komjikelezo uzojabulela imisipha yekhwalithi futhi uthole amandla okukuthatha phakathi nesikhathi sokuqeqeshwa kanye nokuncintisana ngempumelelo. Uma ubamba iqhaza emincintiswaneni engavumeli ukusetshenziswa kwe-steroids, awunazo ukukhathazeka ngakho, njengoba izakhi zanyamalala emzimbeni wakho ngemuva kwamaviki angu-5 ekupheleni komjikelezo. Ngakho-ke, hlela ngesikhathi esifanele futhi ubuke umsebenzi wakho ukhule kakhulu.
IKazlauskas, R. (2010). I-steroids yomklami. Ngaphakathi Ukuqothulwa kwezemidlalo: Izimiso zezinto eziphilayo, Imiphumela kanye nokuhlaziywa(i-155-185). Springer, Berlin, Heidelberg.
Anti-Inflammatory, PI (2011). Ukuvuvukala kokukhula kwe-Muscle. Ukuvuvukala, 5.
Magdziak, K., Osman, N., Tvaroha, A., Ding, J., & Fagan, JM (2011). I-pro-hormones nesithombe somzimba: Kanjani okuningi kakhulu?